Dezie ID3 Tags akpaghị aka, na-agbanwe n'Ụzọ 'Information, duplicated Track
Olee otú dezie ID3 Tags akpaghị aka
Ọ bụrụ na gị music n'ọbá akwụkwọ na-ọma tagged, na-ahazi ọ na-aghọ a nnọọ mfe ọrụ. Egwu ma ọ bụ listi ọkpụkpọ na-enweghị zuru ezu ozi nwere ike nsogbu karịsịa mgbe nchọgharị ma ọ bụ na-akpọ ha. N'eziokwu, o nwere ike ndị ọzọ na-akụda mmụọ ma ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ọtụtụ ndị na egwu na-aha ya ọhụma ma ọ bụ adịghị nwere aha na niile ma ọ bụ na-adịghị haziri na ha albums. Ọ pụrụ ọbụna ịbụ ọzọ nsogbu ma ọ bụrụ na listi ọkpụkpọ 'genre ma ọ bụ artists na-adịghị mere ndokwa n'ụzọ zuru okè. Nrụgide dị otú ahụ pụrụ nanị-ewepụ site iche iche na omume na-akpaghị aka na-eme ID3 mkpado edezi. Isiokwu a ga-enye ndị bara uru nkọwa na esi edezi ID3 mkpado-akpaghị aka.
Part 1.Edit ID3 mkpado gị MP3 collection na Apple iTunes
Part 2.Edit ID3 Tags na TunesGo
Ọ bụ nnọọ mfe imelite album tracks ma ọ bụ listi ọkpụkpọ na ziri ezi ID3 mkpado ọmụma ka ihe atụ, na-ese, na album nakwa dị ka track nọmba site na iTunes. Ị nwere ike itinye, wepu ma ọ bụ dezie ozi banyere tracks ma ọ bụ songs. Ime na-esonụ:
Mepee iTunes. Detuo listi ọkpụkpọ ma ọ bụ albums traktị n'ime iTunes nanị site Ịdọrọ na idobe ha. Jide n'aka na ị ibudatara na arụnyere iTunes.
Dezie album ọmụma, họrọ songs ma ọ bụ listi ọkpụkpọ ma ọ bụ egwu. Wee họrọ ha na album.
Enweta (Control + Pịa) ma ọ bụ nanị nri click na mgbe ahụ enweta 'Get Info'
Ugbu a, ị nwere ike idezi, wepụ ma ọ bụ tinye album si ese, ọgụ aha ma ọ bụ n'afọ ndị album a tọhapụrụ ya. Ịzọpụta mgbanwe, kpatụ 'Ok'
Photo 1,2: Inweta n'Ụzọ Information, edezi Album Ozi
Edezi Album Ozi
Dezie track ọmụma, ị ga-mkpa ịhọrọ onye ọ bụla track na enweta 'Sinụ Info' iji nweta ọmụma nke ọ bụla egwu.
Ị nwere ike ịnyegharị, tinye ma ọ bụ wepu track nọmba, aha wdg ịzọpụta mgbanwe, enweta 'Ok'
Ịchọta Album nchekwa
Iji chọta album nchekwa ahụ, gaa 'Macintosh HD' na mgbe ahụ 'ọrụ' na mgbe ahụ 'wet aha njirimara' na mgbe ahụ 'Music' na mgbe ahụ 'iTunes' na mgbe ahụ 'iTunes Music' ma lezie 'Artist aha'
Ịdọrọ & dobe ya ma ọ bụ detuo ya ebe. Site n'ebe a, ọ dị mfe mpikota onu gụnyere-ekere òkè ya ndị ọzọ. Ị nwere ike nakwa tinye albums ma ọ bụ dezie ha.
Mgbe ụfọdụ, i nwere ike na-agbalị edezi ubi ma anaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe a, họrọ egwu na mgbe ahụ enweta (Control + Click) ma ọ bụ nanị na nri na ịpị. Wee họrọ 'tọghata ID3 mkpado'. Ị ga-enwe otu nhọrọ nke ị na-ahọrọ dị iche iche 'ịsụgharị ederede Characters'. Họrọ 'ascii TO ISO Latin 1'. Zọpụta mgbanwe site na ịpị 'Ok.' Nke a ga-idozi nsogbu ahụ.
Photo 3: ahọpụta ịsụgharị Characters
Ọ bụ nnọọ oké mkpa iji jide n'aka na ndepụta ọkpụkpọ gị ma ọ bụ egwu nwere dum ID3 mkpado agbakwunyere n'ụzọ zuru okè nakwa dị ka huu tracks ma ọ bụ listi ọkpụkpọ 'ọmụma ziri ezi. Tunesgo bụ usoro ihe omume ndị na-eduzi ID3 edezi n'ụzọ dị irè. Iji jiri Tunesgo, ị ga-download na wụnye ya. Ọzọkwa, jide n'aka na ọ bụrụ na gị na ngwaọrụ bụ dakọtara na ya.
Photo 4: launching Tunesgo
Importing / ịgụ isiokwu Music ma ọ bụ egwu
Ozugbo ahụ, omume na-ulo oru, iTunes na-akpaghị aka scanned site na ya nakwa na-agbakwunye listi ọkpụkpọ ma ọ bụ tacks ya n'ọbá akwụkwọ. A edinam a mere ọbụna ma ọ bụrụ na i tinye ọhụrụ traktị ozugbo ị meghee usoro ihe omume.
Photo 5: Music Files, na-ahọpụta Songs
Ọ bụrụ na ị zọpụta ndepụta ọkpụkpọ gị ma ọ bụ egwu ndị ọzọ nchekwa, ọ bụ mbubata mbubata ha. Iji mee nke a mgbata 'Music' na idetuo songs ma ọ bụ dọrọ na dobe music nchekwa ọbá akwụkwọ ma ọ bụ nanị faịlụ tree.
Na-arịọ ka Idozi 1D3 Tags
Iji malite gwara ID3 mkpado, nzọụkwụ mbụ bụ ịchọpụta ihe song na mgbata 'Chọpụta Button.' Bọtịnụ na-emekarị mata họrọ songs ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi ịhọrọ ọtụtụ tracks ozugbo. Mgbe gwara, ọ dị mfe ịchọta tracks ọmụma. Ọzọkwa, lyrics nwere ike mfe-achọ si.
Photo 6: ahọpụta Songs ma ọ bụ nchekwa dezie
Iṅomi button emi odude ke nkụnye eji isi mee bụ nnọọ oké mkpa na ogbe gwara nke ID3 mkpado nke tracks. Ị nwere ike nakwa gbochie mbiputegharị songs eji ya.
Wepụ duplicated n'Ụzọ
Nzọụkwụ ọzọ bụ na mgbakwunye na nke ID3 mkpado gaa na egwu. Họrọ track ị chọrọ na mgbe ahụ enweta 'Mee.' Ị na-mere mgbe a
Photo 7: Wepụ duplicated n'Ụzọ
Scanned na nyegharịa Music Na etịbe Tags
Photo 8: scanned na nyegharịa Music Na etịbe Tags
Edezi dịgasị iche iche
Photo 9: Edezi dịgasị iche iche
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-agụnye ihe ọmụma banyere otu song ma ọ bụ tract mgbe ahụ ị ga mkpa ịgbanwe ma ọ bụ ịgbanwe ya ọmụma. A ezi ihe nlereanya bụ mgbe eji ọhụrụ onyinyo nke na-ese. Ọzọkwa, ị pụrụ ikpebi na-agụnye pụrụ iche nkọwa ma ọ bụ ozi na egwu. Nke a pụrụ nanị-mere site na ịpị 'Dezie' (a icon nwere ike hụrụ n'okpuru). Mgbe ahụ, ọmụma ozi ọ bụla ị chọrọ gị họọrọ track.
Fixing Music ekpuchi / Images / Logo
Photo 10: Edezi dịgasị iche iche
Ị ga-enwe obi ụtọ mgbe na-eso ndị Atụmatụ na otú dezie gị tracks ma ọ bụ music n'ọbá akwụkwọ site n'ịgbaso abụọ ndị a ụzọ. Ihe mere ọtụtụ ndị na-ahọrọ Tunesgo bụ na ọ nwekwara ike-eji dị ka track ọkpụkpọ. Ị nwere ike egwu ma ọ bụ na-ege ntị ọkacha mmasị gị tracks site na usoro ihe omume.
Olee otú Kpido Music Easily on Mac
> Resource> Music> Olee dezie ID3 Tags akpaghị aka, na-agbanwe n'Ụzọ 'Information, duplicated Track